Qatar Airways resumes Phuket flights as Thai resort reopens to international tourism | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Qatar Airways maliteghachiri ụgbọ elu Phuket ka ebe ezumike Thai laghachiri na njem mba ụwa
Dịka Thailand na-ebuteghachi ndị njem si gburugburu ụwa, ndị njem zuru oke ga-enwe ike ịga leta ọzọ.
Airline ga-arụ ọrụ ụgbọ elu anọ kwa izu na-amalite July 1
Utezọ ga-arụ ọrụ site na ụgbọ elu nke oge a ma na-adigide Boeing 787 Dreamliner
Qatar Airways ga-enye onyinye maka oche 22 na Klaasị Azụmaahịa na 232 na Ahịa Klaasị na ụgbọ elu Phuket
Qatar Airways na-egosi nnukwu ihe dị ịrịba ama na nlọghachi nke njem ezumike mba ụwa na ịmaliteghachi ụgbọ elu anọ kwa izu gaa njem ezumike ezumike nke Phuket, Thailand, malite na 1 July. Na mgbakwunye na ụgbọ elu Bangkok 12 kwa izu, ụgbọ elu ga-arụ ọrụ ngụkọta nke njem 16 kwa izu na Thailand, na-enye njikọ na-enweghị ntụpọ maka ndị njem ya si Europe, Middle East na United States.
Ka Thailand na-alaghachikwuru ndị na-eme njem ezumike site na gburugburu ụwa, ndị njem na-agba ọgwụ mgbochi zuru oke ga-enwe ike ịleta ọzọ n'oge na-adịghị anya ma na-enwekwa nnabata na ọrụ dị na Qatar Airways na n'isi ya, Hamad International Airport, nke mbụ na naanị 5-Star COVID- Ọdụ ụgbọ elu gosiri nchekwa nchekwa 19 na Middle East.
Qatar Airways Onye isi otu ndị isi, Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Site na ịmaliteghachi ụgbọ elu na Phuket, Qatar Airways gosipụtara nnukwu ihe dị mkpa na mgbake nke njem njem mba ụwa. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ndị isi na ụlọ ọrụ, na-esetịpụ akara maka nchekwa, ihe ọhụrụ na ọrụ ndị ahịa n'oge ọrịa na-efe efe.
“Anyị maara na ọtụtụ ndị ahịa anyị nwere agụụ ịlaghachi na-efe efe ma laghachi na ụfọdụ ebe ezumike ha kachasị amasị, dịka Phuket. N'ịbụ onye a ma ama maka ọtụtụ osimiri ndị mara mma, ọnọdụ mmekọrịta ezinụlọ, mmiri turquoise na nri mpaghara dị ụtọ, Phuket bụ ebe kachasị mma maka ezumike ezumike. Anyị na-ele anya iso ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ na Thailand kwado mgbake nke ngalaba njem ha. ”
Amalitere na 2010, Phuket ghọrọ Qatar Airways '93rd ebe oge. Ebe ezumike a bụ ndọta maka ndị bịara ezumike, ọkachasị sitere na Europe, Middle East na United States. Ndi Boeing 787 Dreamliner nke ugbua na ugbo elu ga-aru uzo a maka ndi njem 22 noo na Business Class na 232 na Classy Economy.
Usoro Phuket malitere 1 July:
Doha (DOH) na Phuket (HKT) QR 840 na-apụ 02:55 bịarutere 13:30 (Wednesday, Friday, Saturday, Sunday)
Phuket (HKT) na Doha (DOH) QR 841 na-apụ 02: 30 rutere 05: 30 (Mọnde, Tọzdee, Satọde, Sọnde)